अब मान्छे डेढ सय वर्ष सम्म बाच्ने ! – Medianp
अब मान्छे डेढ सय वर्ष सम्म बाच्ने !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, पुष २५, २०७५१७:२३0
काठमाडौं । एउटा अनुसन्धानले के देखाएको छ भने अब आउने दशकहरुमा मानिसको आयू १ सय ४० वर्षसम्म पुग्नेवाला छ ।
चिकित्सा क्षेत्रमा भइरहेको लगातारको बदलावाका कारण यस्तो सम्भव भएको शोधकर्ताहरुले बताएका छन् । केही समयअघि विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठकमा भाग लिनका लागि केही विशेषज्ञहरुलाई आमन्त्रित गरिएको थियो । बैठकका क्रममा विशेषज्ञहरुले बताएका छन् की प्रविधिको उभार आइरहेको यस परिदृश्यमा अस्पतालको भूमिका केवल इमर्जेन्सी कक्षसम्म मात्र रहनेछ ।
अस्पतालको प्रबन्ध पनि डिजिटल प्रविधिमा आधारित हुनेछ । जसको माध्यमबाट मेडिकल रेकर्ड तुरुन्तै अस्पताललाई प्राप्त हुनेछ । विशेषज्ञहरुका अनुसार केही दशकभित्रै मानिसहरु १ सय ४० वर्षसम्म बाँच्नेछन् । अस्पताल चाहीँ आकस्मिक चिकित्सा कक्षको रुपमा सिमित हुनेछ । किनकी मानिसहरुले आफ्नो सामान्य रोगहरुको समाधान आफैले गर्न सक्नेछन् ।
भूमिहीनको लगत लिइने
हरेक पुरुषले पढ्नै पर्ने कुरा ! श्रीमतीलाई खुसी बनाउन अपनाउनुहोस् यी उपाय !